GOORMA IYO HALKEE BAAN KA SOO QAADAN KARAA TALLAALKA?
Dadka Minnesota ee gaaray 12 jir iyo wixii ka weyn ayaa xaq u leh tallaalka.
WAA IN LA ISKU DIIWAANGELIYO TALLAALKA
Kilinigyo tallaalka ah ayaa muddo ka furnaanaya degmada Hennepin County
Inta u dhaxeysa hadda ilaa iyo 1-da Julaay, Degmada Hennepin County dadka waxay u haysaa ballamaha tallaalka COVID-19 oo degdeg ah oo loo helayo dhammaan dadka isku diiwaangeliya. Dadka ballan la’aanta iska yimaada waa haddii tallaalku soo haro. Khasab ma aha in ay dadku ku nool yihiin degmada Hennepin County:
Diiwaangelinta Tallaalka COVID-19 ee degmada Hennepin County
Wixii su’aalo ah ama si laguugu caawiyo diiwaangelinta, soo garaac 612-348-8900. Waxaa la isku caawinayaa luuqadaha Ingiriiska, Isbaanishka, Soomaaliga iyo Moong.
Kilinigga Caafimaadka Dadweynaha ee Degmada Hennepin County
Kilinigga Caafimaadka Dadweynaha ee Degmada Hennepin County waxa uu tallaalka koowaad iyo kan labaad ee COVID-19 u hayaa dadka gaaray 12 jir iyo wixii ka weyn saacadaha shaqada ee caadiga ah. Kiliniggu waxa uu hayaa tallaallada Pfizer, Moderna, iyo Johnson iyo Johnson. Soo garaac 612-543-5555 si aad u qabsato ballan ama u hesho macluumaad dheeraad ah. Dadka ballan la’aanta iska yimaada waa haddii tallaalku soo haro.
Isniin, Talaado, Arbaco, iyo Jimco: 8-da subaxnimo ilaa 4-ta galabnimo
Khamiis: 10-ka subaxnimo ilaa 4-ta galabnimo
Cinwaanka kilinigga waa: Dabaqa afaraad, Health Services Building; 525 Portland Ave; Minneapolis, MN 55415
Sida lagu imaan karo Kilinigga Caafimaadka Dadweynaha ee Degmada Hennepin County:
Khadka tareenka buluugga iyo cagaarka boosteejada U.S. Bank Stadium Station, oo wax yar ayaa looga soo lugeynayaa (0.3 meyl) kilinigga. Basas badan oo magaalada dhex mara ayaa iyaguna istaaga agagaarka kilinigga.
Kilinigga waxa uu dadka u hayaa boono ah qiimdhimista meesha baabuurta la dhigto ee Hennepin Healthcare ee 6th Street iyo Park Avenue.
Waxa kale oo jira meelo jidka ah oo lacag la geliyo oo dhow oo jidka oo dhan laga helo.
Fursadaha kale ee tallaalka
Raadso oo la xiriir goobaha kale ee tallaalka adigoo isticmaalaya Vaccine Locator.
Ka eego goobaha tallaalka COVID-19 adigoo isticmaalaya Minnesota’s Vaccine Connector.
Ama la xiriir kilinigga uu joogo dhakhtarkaaga.
Tallaalka kuugu fiican ee COVID-19, waa kan kuugu horreeya ee aad heli karto.
DHIIRIGELINTA TALAAKA COVID-19
Hada ilaa August 15, waxaad helaysaa hadiyad kaadh $50 ah markaad ka qaadatid talaalka COVID-19 meelaha ay Degmada Hennepin ku qabanayso dhacdooyin/kulamo talaalka ah. Inta talaalka la hayaa ka dhamaanayo.
☎️ Ka wac 612-348-8900 wixii caawimaad afafka English, Spanish, Somali iyo Hmong ah.
Ururada bulshadu waxay heli karaan lacag gaaraysa ilaa $3,000 oo deeq ah taasoo ay u isticmaalayaan dhiirigalinta talaalka COVID-19. Wax badan ka baro oo ka codso linkigan hennepin.us/community-vaccination
Laga bilaabo July 1, waxay Degmada Hennepin bixinaysaa dhiirigelin lagu kordhinayo talaalka bulshada laguna yareynayo kala duwanaanshaha. Degmada Hennepin waxay siinaysaa dhiirigelinta talaalka shaqsiyaadka iyo ururada bulshada ee ku caawinaya horumarinta talaalka COVID-19
Dhiirigelita talaalka degdega ah ee shakhsiyaadka
Inta u dhaxaysa July 1 iyo August 15 (ama ilaa inta talaalada la hayaa ka dhamaanayaan), Degmada Hennepin waxay siinaysaa kaadh $50 oo hadiyad aha kuwan:
Qofkasta oo 18 iyo ka weyn ah oo ka qaata qiyaasta koowaad iyo tan labaad ee talaaka COVID-19 meel kasta oo ay Degmada Hennepin ku qabanayso dhacdo/kulan is talaalis ah.
Waalidiint/mas’uuliyiinta da’yarta ka weyn 12 jir ee ka qaatay talaalka COVID-19 qiyaastiisa koowaad ama tan labaad meelaha ay Degmada Hennepin ku qabato dhacdo/kulan is talaalis ah
Da’yarta aan qofna la socon oo awooda inay bixiyaan ogolaasho ee ka qaata talaalka COVID-19 qiyaastiisa koowaad ama tan labaad meel kasta oo ay Degmada Hennepin ku qabatay dhacdo/kulan is talaalis ah
Dadka qaata labada qiyaasood waxay heli doonaan laba kaar oo hadiyado $50 Visa ah. Waxaa dhacdooyinkan/kulamadan kafaalo qaaday degmada, marka ma jirto wax lacag ah oo lagaa qaadayo talaalka mana aha inaad inaad degan tahay Degmada Hennepin si aad uga qayb qaadatid. Balan la’aan xadidan baa la ogolyahay. Horay isu diiwaangelin baase haboon.
Dhamaan dhacdooyinka/kulamada talaalka ee soo socda ee u furan dadwaynaha iyo si aad isu diwaan geliso halkan ka fiiri hennepin.us/vaccineregistration.
Wixii su’aalo ah ama si aad isu diiwaan geliso, ka wac tilmaan bixiyaha COVID-19 khadkan 612-348-8900, Isniinta ilaa Jimcaha, 8 aroortii/subaxnimo iaa 4:30 galabnimo. Saacadaha shaqada ka dib, fariin baad ka tagi kartaa. Caawimaadana waxaa ku heli kartaa afafka English, Spanish, Somali iyo Hmong.
Dhiirigelita talaalka degdega ah Ururada bulshada
Degmada Hennepin waxay kaloo siinaysaa ururada bulshada deeq gaaraysa ilaa $3,000 oo aadan dhiirigelinta talaalka. Tusaalooyinka dhiirigelinta ee ururada bulshada ay inay bixiyaan laga yaabo waxaa ka mida cunto, madadaalo, dhacdo/kulmo barashada talaalka, kaarar hadiyado ah, iyo xirmooyin mahadcelino ah. Ururada waa inay isticmaalaan lacagtooda dhiirigelinta talaalka ugu dambayn Septembar 30, 2021
Ururada bulshadu waxay deeqda dhiirigelinta talaalka ka codsan karaan halkan hennepin.us/community-vaccination
Is-diiwaangelinta Tallaalka Hennepin County
Is qor si laguula soo xiriiro marka laguu hayo ballanta tallaalka. Khasab ma aha in aad ku nooshahay degmada Hennepin.
Khadka Macluumaadka Tallaalka
Wixii ah su’aalo iyo sida la isugu diiwaangelinayo tallaalka, soo garaac 612-348-8900.
Ku-xiridda Tallaalka Minnesota
Si aad u ogaato helidda tallaalka, isku qor barnaamijka Ku-xiridda Tallaalka ee gobolka.